Ingxoxo enkulu eTshayina eTshintshi-M6300 Ingxelo evela kwiDilesi yokuSebenza yaBaxumi: Ifama yemfuyo emantla eChina Eyona nto iluhlaza: Imanyolo yenkomo, umgquba weegusha Umthamo wonyaka weMfuyo yeMfuyo: iitoni ezingama-78 500 ngokweSebe lezoLimo lase China, China ...
Ungcoliseko esilufumana kwiNkunkuma VS Izibonelelo esizifumanayo ngokwenza isichumiso kuyo
Izibonelelo zomgquba kumhlaba nezolimo Amanzi nolondolozo lomhlaba. Ikhusela umgangatho wamanzi aphantsi komhlaba. Iphepha ukuveliswa kwemethane kunye nokwenziwa kwe-leachate kwindawo yokulahla inkunkuma ngokuguqula izinto ezingafunekiyo kwizinto zokugcwalisa umhlaba zibe ngumgquba. Ithintela ukhukhuliseko kunye nelahleko ye-turf ezindleleni, hi ...
Iindlela ezi-8 eziphezulu zokuChonga ngomgquba ngo-2021
1.Organics out of the landfill mandates Similar in the 1980s and 1990s in the 1990s, the 2010s showed that landfill disposal or mandates are effective tools to drive organic to composting and anaerobic digestion (AD). 2. Ungcoliseko -ukujongana nalo Ukonyusa urhwebo kunye ...